अष्ट्रेलियामा कामको शोषणमा पर्नु भयो ? यसरी गर्नुहोस् नेपाली भाषामै उजुरी! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०७४, शुक्रबार August 4, 2017
मेलबर्न । अष्ट्रेलियामा काममा आफू शोषणमा परेको थाहा पाए नेपाली भाषामै उजुरी गर्न पार्इने भएको छ । Fair Work Ombudsman ले यस्तो सुविधा ल्याएको हो । काममा आफू कुनै पनि कारणले शोषणमा परेको तथा उचित तलब नपाएको तपाईले सजिलै उजुरी गर्न सक्नु हुनेछ । यसरी उजुरी गर्दा आफ्नो भिसामा समस्या आउने डर हुँदैन र आफ्नै भाषामा उजुरी गर्न सकिन्छ ।
उजुरी गर्नेको परिचय पनि यसमा खुलाईदैन । यसको वेबसाइटमा नेपालीमा लेखिएको छ ,” यदि तपाईँलाई कसैले कार्यस्थलका कानुनहरूको पालना गरेको छैन भन्ने लागेमा तर तपाईँ आफू संलग्न हुन नचाहेकमा, तपाईँले परिचय नखुल्नेगरी हामीलाई उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ।”
गत वर्षको मे महिनादेखि सुरु भएको यस सेवामा हालसम्म १० हजार उजुरी परिसकेको बताइएको छ । यीमध्ये आएका विदेशी कामदारका उजुरीमा ट्रली कलेक्टर र होटल क्लिनर बढी रहेका छन् । यो सेवाको वेबसाइटमा नेपाली भाषामा दिइएको जानकारी हेर्न र उजुरी गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
रक्सी खाएपछि किन अंग्रेजी बोल्छन् नेपालीहरु ? यस्तो रहेछ कारण